Xalka Qolka Shirka | Brocade Smart Space Technology Co., Ltd.
4K HDMI kordhiye
Kordhinta HDMI wireless
Nidaamka gudbinta fiidiyoowga wireless-ka ah
Xalka Qolka Shirka
Cilmi baaris iyo horumar
Qolka kulanka ee casriga ah waxaa ka buuxa dad wata aalado kala duwan oo leh noocyo kala geddisan. Dhammaantood waxay u baahan doonaan inay isku xirmaan, soo bandhigaan oo ay wada shaqeeyaan. Waa lagama maarmaan iskuxirayaashani inay yihiin kuwo deg deg ah oo dareen leh oo leh gudbinta xogta xasilloon oo sahlan in lala wadaago.
Brocade wuxuu bixiyaa xalal dhan-dhinac ah iyo xalal wireless ah oo laxiriira ganacsiga iyo shuraakada shirkadaha. Waxaan u adeegsanaa tikniyoolajiyadda HDMI si aan qolkaaga shirarka ugu beddelno goob shaqo oo waxtar leh oo wax soo saar leh.
Xalka Fiilooyinka: Xalka Qolka Shirarka oo leh xirmo 4K HDMI Extender
Brocade 4K HDMI Extender-DK02 xalka siligga qolka shirarka waxaa loogu talagalay inuu ahaado mid la awoodi karo, si sahlan loo rakibi karo, oo macquul ah in la isticmaalo, iyo si xoog leh wax ku ool u ah soo bandhigida iyo xalka maaraynta calaamadaha maqalka iyo muuqaalka qolka. Xalku wuxuu la yimaadaa gudbiye kumbuyuutar oo leh 1 HDMI talooyin, qaataha darbiga ku dhajiya ee leh 1 HDMI soo saar, 2 adabtarada iyo 1 xiriiriyaha Cat5e / 6. Xalkan waxaa sidoo kale kujira isha isha sida koombuyuutarka oo leh 1 HDMI dekedda laga soo qaado desktop iyo bandhig leh 1 HDMI dekedda kaqeybgalayaasha shirarka. Faahfaahinta ayaa ah gudbiyaha kumbuyuutarka ku xira 1 fiilada HDMI wuxuuna isku xiraa qalabka wax lagu duubo ee 1 Cat5e / 6, halka qaataha uu kumbuyuutarka ku xirayo muuqaalka 1 HDMI wuxuuna isku xiraa gudbiye isla cable-ka Cat5e / 6. Iyadoo la adeegsanayo tiknoolajiyada HDMI, xirmada waxay u wareejin kartaa fiidiyowga 4K / 60hz UHD illaa cagaha 197 halka calaamadaha 1080p ay aadi karaan illaa 393 cagood. Xalka shirarka DK02 ee silig leh ayaa badalaya saacado naqshadeynta iyo shaqada rakibida waana xalka ugu fiican suuqa teknolojiyadda shirkadda AV.
Xalka Fiirooyinka: Xalka Qolka Shirarka oo ay ku jiraan xirmada Kordhinta wireless-ka ee HDMI
Qalabka loo yaqaan 'Brocade wireless HDMI extender kit-CTS200 silsiladda qolka shirarka wireless waa xalka ugu habboon ee qolalka shirarka. Xalku wuxuu la yimaadaa gudbiye kumbuyuutar oo leh 1 HDMI talooyin, qaataha darbiga ku dhajiya 1 HDMI soosaarka iyo 2 adabtarada. Xalkan waxaa sidoo kale kujira isha isha sida koombuyuutarka oo leh 1 HDMI oo laga helo desktop iyo bandhig 1 HDMI loogu talagalay kaqeybgalayaasha shirka. Faahfaahinta ayaa ah gudbiyaha kumbuyuutarka ku xira 1 fiilada HDMI halka qaataha uu ku xirayo muuqaalka ka badan 1 fiilada HDMI. Iyada oo leh HDMI iyo teknoolojiyada wireless-ka ah ee WIFI, xirmada waxay u wareejin kartaa fiidiyowga 4K / 30hz UHD illaa cagaha 197 halka calaamadaha 1080p ay aadi karaan illaa 656 fuudh. Way fududahay in la shaqeeyo. Kaliya xir oo ciyaar. Looma baahna rakibida darawalnimada. CTS200 waxaad kula wadaagi kartaa waxa ku jira aaladahaaga kala duwan shaashadda soo bandhigista adigoo hal gujin ah.
Cinwaanka:18 / F, Dhismaha 6-2, Xinchuan Innovation iyo Technology Park, Aagga teknolojiyada sare, Chengdu, Shiinaha